पुरातन युनानी गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक: सही विज्ञान को विकास गर्न ठूलो योगदान गरे। त्यतिबेला अन्य जातिका पनि, ज्ञान केही मात्रामा छ। तर मिश्रीहरूले र बेबिलोनीहरूले सामग्री पहिले नै खुला थिए र क्षेत्र अन्वेषण भने, युनानी पनि थप गएका छन्। उनीहरू त्यहाँ रोक्न र जीवन विभिन्न क्षेत्रहरू मा नयाँ क्षितिज खोल्न थिएन।
यो विज्ञान सबैभन्दा पुरानो र लोकप्रिय मध्ये एक छ। निस्सन्देह, यो युनानी संस्कृति र भूगोल, तर्क र अर्थशास्त्र को विकास गर्न योगदान। विचार को आफ्नो स्कूल आज पनि समकालीनहरूको बयान र आविष्कारहरू amazes भनेर उन्नत थियो। तर गणित वैज्ञानिक ज्ञान को यो जटिल प्रणाली मा एक आला तोकिएको।
गणित को क्षेत्र मा उपलब्धिहरू को धेरै युनानी संग यति लोकप्रिय भएको छ कि छलफलमा आवश्यक छ। मान्छे, वर्ग भेला तर्क र यसरी सही निर्णय गर्न आउँछन्। "एक विवाद जन्मिएको सत्य मा" - यो dogma हामीलाई यो समय देखि पुगेको छ।
कुनै पनि ग्रीक गणितज्ञ सम्मान र आदर गरिन्थ्यो। व्युत्पन्न प्रमेयों र सूत्रहरू, यो सरल मान्छे स्तम्भ को शीर्ष उसलाई प्रशंसा बुझ्न गाह्रो छ, अन्य ठूलो मन को बाँध्न। एक विज्ञान रूपमा गणित को विकास आर्किमिडीज, पाइथागोरस, युक्लिड र अन्य व्यक्तित्व, विद्यालय र विश्वविद्यालय मा आधुनिक बीजगणित र ज्यामिति पाठ्यक्रम को आधार गठन गर्ने काम र आविष्कारहरू गर्न धेरै owes।
पाइथागोरस र आफ्नो स्कूल
यो ग्रीक गणितज्ञ, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, सार्वजनिक र धार्मिक तथ्याङ्कले। उहाँले 580 मा लगभग जन्म भएको थियो ई.पू. , Samos को टापुमा भनेर उहाँले भनिन्थ्यो Samos मानिसहरू। पौराणिक कथा अनुसार, पाइथागोरस धेरै राम्रो र सुन्दर मानिस थिए। उहाँले सबै नयाँ र अज्ञात अध्ययन कहिल्यै थकित, यो साँच्चै एउटा कुलीन शिक्षा थियो। उहाँले मात्र होइन घर मा तर पनि भारत, मिश्र र बेबिलोनमा जवान अध्ययन।
पाइथागोरस, प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ र slaveholders र अभिजात वर्ग को संरक्षक। कोर गर्न Idealist, Croton मा, त्यो दुवै धार्मिक र राजनीतिक संरचना थियो जो आफ्नो स्कूल, स्थापित। यसको मुख्य विशेषताहरु - दैनिक जीवन, सख्त नियम र canons को संगठन खाली गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, समुदाय को सदस्य निजी सम्पत्ति स्वामित्व सकिएन, एक शाकाहारी आहार पालन, र आफ्नो शिक्षक को अपरिचित शिक्षा खोल्न छैन undertook।
जब Croton, पाइथागोरस र आफ्ना अनुयायीहरूलाई लोकतन्त्र प्रसार Metapontum भाग्छन्। तर एक लोकप्रिय विद्रोह शहर मा raged। को झगडे मध्ये 90 वर्षीया गणितज्ञ मृत्यु भएको थियो। साथ उहाँलाई अवस्थित गर्न र यसको प्रसिद्ध स्कूल भएनन्।
यो आफ्नो लेखकत्व पूर्णाङ्कहरुको, उनको गुण र अनुपात विवरण पर्छ थियो केही लागि ज्ञात छ। उहाँले पनि पृथ्वी ग्रह ताराहरू रूपमा गति बाटो छैन भनेर, राउन्ड छ कि दावी गर्ने पहिलो वैज्ञानिकहरूको एक थियो। यी विचारहरू Copernicus को प्रसिद्ध हेलियोसेन्ट्रिक शिक्षा आधार गठन। बैज्ञानिक को सम्पूर्ण जीवन रहस्य घेरिएको छ भएकोले छैन यसको गतिविधिहरु बारे रोचक तथ्य को धेरै बाँचे गरेका। केही उहाँले प्रसिद्ध प्रमेय साबित कि शङ्का। केही रिपोर्ट अनुसार, तिनीहरूले लामो गणित को जन्म अघि उनको, र धेरै अन्य प्राचीन मानिसहरूका थाह थियो।
ग्रीक दार्शनिक तथा गणितज्ञ क्षमता धेरै थियो, र केवल विज्ञान मा। आफ्नो नाम र गतिविधिहरु मिथक र दन्त्यकथा र mysticism मा shrouded छन्। यो पाइथागोरस आत्माको प्रबन्धन कि underworld, तिनीहरूलाई सञ्चार, पशु भाषा बुझ्नुहुन्छ संग उहाँलाई चराहरूको उडान सही दिशा सेट भविष्यमा भविष्यवाणी गर्न सक्षम छ विश्वास थियो। उहाँलाई voodoo क्षमता पनि श्रेय।
आर्किमिडीज: मुख्य काम
यो युग, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ र आविष्कारक को सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रतिनिधिहरूलाई छ। उहाँले सिरैक्यूज मा 287 ई.पू. मा जन्म भएको थियो। उहाँले लगभग सबै आफ्नो जीवन बस्ने यो सानो सहरमा, त्यसपछि आफ्नो प्रसिद्ध ग्रंथ र नयाँ तंत्र परीक्षण लेखे। आर्किमिडीज प्रशिक्षण उच्चतम स्तर मा भयो त आफ्नो बुबा, एक अदालतले astronomer Phidias थियो। उहाँले जो एक भन्दा बढी दिन बिताए पढ्ने कोठा मा, समय को सबै भन्दा राम्रो पुस्तकालय पहुँच थियो।
यो वैज्ञानिक धेरै गणितीय काम बाँचे छ। पारंपरिक, तीन मुख्य समूह विभाजित गर्न सकिन्छ।
समर्पित मात्रा र curvilinear शरीर र तथ्याङ्कले को क्षेत्र काम गर्दछ। तिनीहरूले सिद्ध प्रमेयों धेरै समावेश गर्दछ।
hydrostatic र स्थिर समस्या को ज्यामितीय विश्लेषण। तथ्याङ्कले को ब्यालेन्स, पानी र यति मा शरीर स्थिति बारे यो अध्ययन।
अन्य गणितीय काम। उदाहरणका लागि, बालुवा को अनाज को कलन बारेमा, यांत्रिक प्रमेय साबित।
आर्किमिडीज रोमी सेनाले द्वारा सिरैक्यूज को खिच्ने समयमा मृत्यु भएको थियो। उहाँले त नयाँ geometrical समस्या को रेखाचित्र द्वारा मोहित भएको थियो, उहाँले फर्केर आए जो सैनिक नोटिस गर्नुभएन। यो सैनिक कप्तान एक प्रसिद्ध गणितज्ञ र दार्शनिक जीवन सुरक्षित गर्न आदेश दिनुभएको थाह छैन, बैज्ञानिक मारे।
सही विज्ञान को विकास गर्न आर्किमिडीज योगदान
हरेक बच्चा उच्च विद्यालय देखि यो उल्लेखनीय आंकडा परिचित छ। जसले, "युरेका" उद्गार पुरातन युनानी गणितज्ञ छ? यो प्रश्नको जवाफ सरल छ - आर्किमिडीज छ। पौराणिक कथा अनुसार, राजा पत्ता लगाउन आदेश - शुद्ध सुन अन्य धातु संग diluting, आफ्नो मुकुट जौहरी गरे वा धोखा। यो समस्या मा सोच, आर्किमिडीज पानी भरिएको स्नान मा राख्नु। को टब, अझै पनि आफ्नो शरीर द्वारा विस्थापित पानी मात्रा को किनारा भन्दा हालिएको छ तरल को रकम: र त्यसपछि यो एक छक्कलाग्दो खोज उहाँलाई देखापर्यो। यो खोजन गरे होने, उहाँले सबै शब्द "युरेका" थाहा रुनुभयो। यो उद्गार संग प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ को स्नान बाहिर कूद र घर आफ्नो खोज रेकर्ड गर्न hurrying, को शौकीन मा, भाग्यो।
साथै, आर्किमिडीज, एक पैराबोलिक खण्ड को क्षेत्र गणना गर्न सक्षम integrals को खोज दुई हजार वर्ष। उहाँले एक सर्कल व्यास को अनुपात र मंडल को लम्बाइ सधैं कुनै पनि यस्तो त्यहि छ भनेर प्रमाणित, विश्वको नम्बर "पाइ" खोलियो ज्यामितियआकार। आधुनिक विमान र जहाज propellers को प्रोटोटाइप - उहाँले तथाकथित आर्किमिडीज 'स्क्रू सिर्जना गरियो। फालिएको र मिसिन उठाने आफ्नो उपलब्धिहरू बीचमा। अहिलेसम्म शत्रु जहाज नाश थिए जो हालतमा आफ्नो "Incendiary दर्पण", को सृष्टिको रहस्य अनुसन्धानकर्ताहरूले मिति खुलासा गरेनन्।
उहाँले सांगीतिक काम मा काम आफ्नो अधिकांश समय, मेकानिक्स र भौतिक को रहस्य, उहाँले खगोल विज्ञान अध्ययन प्रकट गर्छ। तर आफ्नो काम अझै गणित समर्पित भाग: धेरै प्रमाणहरू र प्रमेयों आपत्ति गर्न ल्याए। युक्लिड काम उहाँलाई पछि धेरै शताब्दीयौंदेखि गर्ने बस्थे अन्य वैज्ञानिकहरू लागि आधार बन्यो रूपमा यो विज्ञान को विकास गर्न आफ्नो योगदान, overestimate गर्न गाह्रो छ।
15 पुस्तकहरू निर्वाचकगण, "सुरुवात" को एक चिरपरिचित गणितीय संकलनको लेखे जो प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ को नाम के हो? निस्सन्देह, युक्लिड। उहाँले, ज्यामिति को मुख्य प्रस्ताव तैयार गर्न सक्षम थियो महत्त्वपूर्ण प्रमेय साबित एक त्रिकोण को कोण को योगफल र Pythagorean प्रमेय। आफ्नो नाम को निर्माण बारेमा शिक्षा संग सम्बन्धित छ रूपमा नियमित पोलिहेड्रा Name, जो आज ज्यामिति पाठ प्रत्येक जवान गणितज्ञ प्रशंसा गर्न सकिन्छ। युक्लिड थकान को विधि खोज। यो न्यूटन अपनाए थियो र Leibniz गणना को एक विधि पत्ता: अभिन्न र अंतर।
यो ग्रीक गणितज्ञ 625 ई.पू. वरिपरि जन्म। लामो समय को लागि उहाँले मिश्र बस्थे र राम्ररी देश को शासक, राजा Amasis सँग सम्बन्धित थियो। पौराणिक कथा यो छ कि त्यो एक पटक स्तब्ध फिरऊनले मात्र यसको छाया को आकार मा पिरामिड को उचाइ मापन।
Thales ग्रीक विज्ञान को पुर्खा, सात बुद्धिमानी मानिसहरू जो ज्ञान को नींव परिवर्तन को एक मानिन्छ। इतिहासकारहरूले Thales ज्यामिति को मौलिक प्रमेयों प्रमाणित गर्न पहिलो थियो भन्ने विश्वास गर्छन्। उदाहरणका लागि, एक आधा गोला बना कोण कि कुँदिएको सधैं एक सीधा लाइन छ, सर्कल व्यास को बराबर आधार भएको समदिबाहु त्रिकोण को कुना मा दुई बराबर भागमा विभाजन, सबै ठाडो कोण यसपछी समान छन्, र।
Thales जो ट्यूटोरियल सधैं तिनीहरूले एक अनुहार र यो आसन्न को कुना समान छन् भने, त्यही हुनेछ अनुसार, एक सूत्र उत्पन्न। उहाँले टाढा ससर्त ट्यूटोरियल द्वारा जहाज जलयात्रा गर्न दूरी कसरी निर्धारण गर्न सिके। साथै, उहाँले आविष्कारहरू को एक जोडी खगोल विज्ञान मा, equinoxes र solstices को सही समय निर्धारण गरे। यो पनि सही वर्ष को अवधि गणना पहिलो हो।
यो एकदम बहुमुखी आंकडा छ। उहाँले ठाउँ, को अध्ययन को रुचाउनु थियो भौगोलिक आविष्कारहरू, अध्ययन बोली, भाषा पालैपालो र ऐतिहासिक घटनाहरू। बीजगणित र ज्यामिति को क्षेत्र मा, त्यो, ग्रीक गणितज्ञ हामीलाई थाह छ प्रणाली primes मा खोज गरे। उहाँले सिर्जना "Eratosthenes को छनौट", विद्यालयमा सिकाउनुभयो अहिलेसम्म जो एक रोचक विधि। उहाँलाई धन्यवाद, तपाईं कुल संख्या को primes मार्फत चाल्नु गर्न सक्नुहुन्छ। यो आज हो जस्तै तथ्याङ्कले, लगाईन्छ छैन, र कुल आंकडा मा घायल। यसैले नाम - "चलनी"।
दोहरीकरण घन बारेमा मेकानिक्स Delian समस्या को व्यवस्था आधारित समाधान को लागि एक उपकरण - Eratosthenes स्वतन्त्र निर्माण गर्न mezolyaby सक्षम थियो। उहाँले पहिलो पृथ्वी मापन गर्न सक्षम थियो। 39 हजार 960 किलोमिटर - को स्थलीय मेरिडियन को लम्बाइ छलफल भएको उहाँले ग्रह को मंडल deduced। गलत मात्र केही सानातिना 300 किलोमिटर। Eratosthenes साँच्चै उल्लेखनीय आफ्नो उपलब्धिहरू गणित बिना समय को आंकडा यसको सामान्य रूप मा अवस्थित सकेन।
यो ग्रीक गणितज्ञ पहिलो शताब्दी ई.पू. बस्थे। आफ्नो जीवनको बारेमा सही प्रमाण धेरै सानो हाम्रो दिन आए रूपमा डाटा, अनुमानित छ। यो बकुल्लो भौतिक, मेकानिक्स, मूल्यवान ईन्जिनियरिङ् विज्ञान उपलब्धिहरू को व्यवस्था को रुचाउनु थियो ज्ञात छ। सडक, आत्म-चार्ज बन्दूक र क्रसबो नाप्ने लागि उपकरण - जसले पहिलो स्वचालित ढोका, एक कठपुतली थिएटर, एक कल sails, पुरातन "taximeter" सिर्जना उहाँले थियो।
र गणित आफ्नो काम को एक धेरै समर्पित थियो। उहाँले नयाँ ज्यामितीय सूत्रहरू ल्याए ज्यामितियआकार गणना लागि विधिहरू विकास गरे। Geron एक चिरपरिचित सूत्र, उहाँलाई पछि नाम, जब तपाईं आफ्नो पक्ष को लम्बाइ थाहा छ तिमी एक त्रिकोण को क्षेत्र गणना गर्न सक्छन् जो संग सिर्जना गरेको छ। उहाँले आफ्नो काम, तर पनि अन्य वैज्ञानिकहरूको अध्ययन मात्र प्रदर्शन गरिएको छ जसमा हात-लिखित पुस्तकहरू धेरै बाँकी पछि। र यो आफ्नो सबैभन्दा ठूलो गुण हो। हामी आर्किमिडीज, पाइथागोरस र अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ बारेमा आज थाहा यी रेकर्ड मार्फत, सम्पूर्ण पुरातन संसारको लागि युग र महिमित प्राचीन ग्रीस को प्रतीक बनेका छन्।
ग्रीक र रोमन देवताहरूको: फरक के छ?
कै Lun। कागज को घटना को इतिहास
त्यो डच अन्वेषक हाबिल Tasman खोलियो? भूगोल मा योगदान हाबिल Tasman
एक कठिन सिकारक को विशेषताहरु: एक चित्र योजना र एक उदाहरण
बजार स्रोतहरू। प्रकार र बजार को संरचना। माग र आपूर्ति
किन शहर त पूरा गर्न हामीलाई निल्छ दुर्लभ बन्न गर्नुभयो?
को ciliary शरीर (ciliary शरीर): संरचना र कार्य। ड्राइभिङ आँखा
कुरा संरक्षण गर्ने अधिकार टोली "Maynkraft"